मानिसहरू, महिला जस्तै आफ्नो जीवन भर धेरै परीक्षण पारित गर्न छ। एक अध्ययन, पुरुष जनसंख्या मा विशेष बाहिर छ, जो वीर्य भनिन्छ। यस लेखमा, म यो विश्लेषण वर्णन छौँ। तपाईं राम्रो वीर्य विश्लेषण, साथै "zoospermia" को अवधारणा थाह प्राप्त के थाहा।
के वीर्य को विश्लेषण
सुरू गर्न हरेक मानिस अध्ययन बाहिर गर्नुपर्छ हुन भन्न छ। अक्सर यो एक जोडी गर्भ धारण गर्न सक्छन् जब मामला मा पतिको वीर्य आवश्यक छ। यस मामला मा पत्नी प्रजनन को संकेतक खातामा लिएको हो सधैं छ।
साथै, विश्लेषण ती मानिसहरू एक बन्न चाहने बीच सञ्चालन गरिएको छ शुक्राणु दाता। zoospermia: एकै समयमा आफ्नै सामाग्री बिक्री मात्र निष्कर्षमा छन् जो बलियो सेक्स ती प्रतिनिधिहरु, दिइएको छ अधिकृत।
विश्लेषण सधैं मानिसहरू मा कृत्रिम मल लागि तयार गर्ने को लागि गरिन्छ। यो अध्ययन मा थप सही हुनेछ।
मूल्य श्रेणी सर्वेक्षण
डाक्टर यो विश्लेषण सुझाव जसलाई मानिसहरू, निर्देशन निःशुल्क दिइएको छ। राज्य निदान लागि दिन्छिन् र तपाईं आफ्नो बजेट खर्च गर्न छैन।
हामी वीर्य विश्लेषण पारित भने - तपाईंको यो मामला मा सबै इच्छा एक निजी क्लिनिक जान हुनेछ। साथै, एक वैकल्पिक विकल्प कि भुक्तानी सेवा प्रदान सरकार एजेन्सी हुनेछ। यो विश्लेषण लागत विवरण spermogram मा वर्णन हदसम्म मा पूर्ण निर्भर छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। मूल्य 1,000 1,500 गर्न rubles को दायरामा मानक अनुसन्धान को। तपाईं एक विस्तृत निष्कर्षमा आवश्यक छ भने, यो मामला अध्ययन मा थप खर्च हुनेछ। यो अवस्था मा, आनुवंशिक लगे spermogram तथाकथित। एक विश्लेषण यस्तो मूल्य 2,000 5,000 गर्न rubles देखि भिन्न हुन सक्छन्। एक छानबिन यस्तो अक्सर कृत्रिम गर्भाधान गर्न तोकिएको छ।
परीक्षण सकेसम्म सही थियो, यो आवश्यक प्रारम्भिक तयारी छ। अन्यथा, प्रदर्शन गलत हुन सक्छ। आवश्यक सामग्रीको वितरण गर्नु अघि केही दिन सेक्स हरेस लागि। तपाईं पनि रक्सी पिउन र भारी शारीरिक श्रम मा संलग्न गर्न सक्दैन।
त्यहाँ जो शुक्राणु राज्य मानिसहरू अनुमानित धेरै मापदण्ड छन्। मुख्य व्यक्तिहरूलाई विचार गर्नुहोस्।
मानिसहरू अध्ययन पारित को उमेर समूह
सबै को पहिलो खातामा एक पुरुष प्रतिनिधि को उमेर ले। यो कि दुवै zoospermia विरामीहरु तथ्यलाई बावजुद, एकदम फरक हुन सक्छ मानिसहरू 20 र वीर्य को प्रदर्शन को 40 वर्ष मा टिप्पण, लायक छ।
milliliters मा सामाग्री को मात्रा
खातामा surrendered सामाग्री को राशि लिन निश्चित हुनुहोस्। अध्ययन प्रस्तावित कन्टेनर सबै शुक्राणु सङ्कलन गर्न सक्षम थियो भने, यो एक प्रयोगशाला रोक्न आवश्यक छ। अन्यथा, तपाईंको निदान गलत हुन सक्छ।
मापन विशेष pipetting प्रयोग गरेको छ। एकत्र तरल दुई भन्दा कम milliliters को हुन अनिवार्य छ।
समय liquefaction eyakulyanta
वीर्य liquefaction समय देखाउँछ कि अनुसन्धान को मात्रा नाप्ने पछि। सामान्यतया eyakulyant तीस मिनेट भित्र तरल हुन्छ। पछि निर्धारित समय सामान्य प्रतिक्रिया देखा परेको छ भने, टेक्नीसियन विशेष रसायन संग dilution आयोजित। अन्यथा, अनुसन्धान परिणाम गलत हुन सक्छ।
सामाग्री को अम्लता
dilution पछि शुक्राणु अम्लता मापन गरिएको थियो। यो अघिल्लो चरण (एक्लै वा प्रयोग प्रयोगशाला) दीं के विधि फरक छैन।
सामान्य अवस्थामा अम्लता शुक्राणु मा 7.2 पीएच भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ। तर, यो पीएच 8 को स्तर नाघ्न हुँदैन। मापन लेपित गर्न भाग eyakulyanta एक विशेष कागज प्रयोग गरेको छ।
नमूनाको रंग र गन्ध
यी तथ्याङ्कले सधैं व्यक्तिगत हो, र सबै भन्दा अवस्थामा अध्ययन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न छैन। तथापि, तिनीहरूले सधैं परिणाम को विवरण संग फारम संकेत गर्छ।
सामाग्री मा कक्षहरू संख्या
यो आंकडा को निदान लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रयोगशाला विंदुक लिनुभएको हेरविचार सामाग्री को एक सानो राशि र एक माइक्रोस्कोप अन्तर्गत यो जाँच्ने गर्दा। यो एक सरल गणना कदम पछि र तरल को सम्पूर्ण मात्रा मा कसरी धेरै कक्षहरू निर्धारण गरिएको छ। केही प्रयोगशालाहरुमा, प्रति milliliter संख्या देखाउँछ। यो गणना अधिक सही अघिल्लो सर्वेक्षणहरू परिणाम तुलना गर्न मद्दत गर्छ।
पुरुष कक्षहरूको गतिशीलता
यो सूचक परिणाम मूल्यांकन मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चार प्रकार छन् कि टिप्पण लायक छ: निश्चित कक्षहरू, गैर-प्रगतिशील-motile gametes प्रगतिशील र प्रगतिशील-सक्रिय spermatozoa slabopodvizhnye।
एक माइक्रोस्कोप वा कम्प्युटरमा एक विशेष कार्यक्रम संग एक अध्ययन। प्रयोगशाला एक विशेष प्रकारको कक्षहरूको प्रतिशत assesses। परिणाम मूल्यांकन मा, सामान्य अवस्थामा सक्रिय कक्षहरूको संख्या आधा भन्दा कम, जुन zoospermia अर्थ हुँदैन।
विश्लेषण यस प्रकार सधैं एक मानक परीक्षा संग बाहिर छैन, तर, अनुसन्धान को परिणाम स्पष्ट चित्र दिन र एक निदान बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
विश्लेषण प्रयोगशाला समयमा वीर्य staining उत्पादन गर्छ। पछि असामान्य कक्षहरू चिनाउँछ। तिनीहरूलाई gametes हुन सक्छ बीचमा कुनै टाउको वा पुच्छर छ। साथै, यो भाग गलत संरचना हुन सक्छ। आकृति सधैं अध्ययन को मूल्य बढ्छ।
गोलाकार leukocyte सेल सामग्रीको रकम जस्ता कारक मा फारम लिपिबद्ध छन् यी डाटा, र पहिचान अशुद्धताओं शरीर antisperm बाहेक
के zoospermia गर्छ
सबै सूचकहरू अनुसन्धान पछि यो निष्कर्षमा छ। सधैं फारम को अन्त मा प्रस्तुत गरिएको छ। यो एक प्रयोगशाला को निष्कर्ष एक निदान छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईंको परिणाम सिफारिस र अन्तिम निदान छुटकारा गर्ने दक्ष विशेषज्ञ familiarize गर्नुपर्छ।
तपाईं वीर्य विश्लेषण संग राम्रो गरिरहेका छन् भने (जो zoospermia अर्थ), त तपाईं एकदम प्रजनन समारोह को मामला मा स्वस्थ छन्। त्यसैले, के मान एक स्वस्थ मानिस हुनुपर्छ?
विस्थापन हस्तान्तरण सामाग्री भन्दा2milliliters, र कक्षहरू कम्तिमा 40 लाख को कुल संख्या छ। शुक्राणु झन् मोबाइल छन्। आफ्नो trajectory सीधा छ। समय liquefaction eyakulyanta घण्टा थप आधा भन्दा छैन। यस मामला मा, कक्षहरूको स्वयंसमर्थता हराएको छैन। अम्लता अनुपालन।
अब तपाईं zoospermia अर्थ थाहा छ। यो निष्कर्षमा को रसिद पछि धेरै मानिसहरू आतंक र उदास प्राप्त गर्न सुरू गरिन्छ। तर, अवधि सुझाव आफ्नो प्रजनन समारोह सबै सही छ।
तपाईं वीर्य विश्लेषण नियुक्त गर्नुभएको छ भने, यो डर र छानबिन ढिलाइ गर्न आवश्यक छ। यो ढिलो तपाईं समस्याको बारेमा जान्न को छिटो यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनेछ। चिकित्सकको आदेश वा आफ्नै इच्छा मा शुक्राणु अध्ययन खर्च। स्वस्थ रहन!
जोडाहरू र जोडाहरू: फरक के छ र यो ठूलो छ
घर मा आंत्र कसरी खाली गर्न
बच्चाहरु र वयस्क मा autism लक्षण
ब्रह्मांड को सुपर हीरो "मार्वल" हवोक
Multivarka मा Pasties। multivarka रेडमन्ड मा pasties कसरी खाना पकाउनु